ထရမ့်ကို အရေးယူဖို့ လွှတ်တော်ရဲ့ ကြားနာမှုကို လူအများတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်
ထရမ့်ကို အရေးယူဖို့ လွှတ်တော်ရဲ့ ကြားနာမှုကို လူအမ...
14 พ.ย. 2562 - 00:57 น.
အခု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကတော့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကို ရာထူးက ဖြုတ်ချနိုင်ဖို့ စွပ်စွဲပြစ်တင်မှုကို လူအများ နားထောင်နိုင်တဲ့ ကြားနာမှု အမေရိကန် ကွန်ဂရက် လွှတ်တော်မှာ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုလွှတ်တော်မှာ စစ်ဆေးတာကို ရုပ်သံကနေ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတထရမ့်ဟာ နောက်နှစ် အမေရိကန် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲမှာ နောက်ထပ်ရွေးကောက်ခံရရေး အတွက် ယူကရိန်းဆီကနေ အကူအညီကို အာဏာသုံးပြီး ယူတယ်လို့ စွပ်စွဲခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထရမ့်ကို စွပ်စွဲပြစ်တင်အရေးယူနိုင်မယ့် အလားအလာ
ထရမ့် သူ့ကိုယ်သူ ပြန်ပြီး ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးနိုင်
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူ့အတွက် အဓိက ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတလောင်း ဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ မိသားစုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးဖို့ ယူကရိန်းသမ္မတ ဗိုလိုဒီမီယာ ဇယ်လင်းစကီးကို ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခံနေရတာပါ။
ဒါပေမဲ့ ဒီလို စွပ်စွဲမှုတွေကို မစ္စတာ ထရမ့်က ငြင်းဆိုထားပါတယ်။
ဒီကနေ့ ကြားနာမှုမှာ ပထမဆုံး စစ်ဆေးခံရတဲ့ သံတမန်ကတော့ ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ အမေရိကန် မူဝါဒတွေ ကြီးကြပ်သူ ဂျော့ချ် ကန့် ဖြစ်ပါတယ်။
သူက ထရမ့်ရဲ့ ရှေ့နေ ရူဒီ ဂျူလီယာနီဟာ ယူကရိန်းမှာရှိတဲ့ အမေရိကန် သံတမန်တွေကို အသုံးချတယ်လို့ စွပ်စွဲထားပါတယ်။
ဂျူလီယာနီရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ အမေရိကန်နဲ့ ယူကရိန်း နိုင်ငံတို့ရဲ့ အကျိုးကို ထိပါးစေပြီး နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကို ပျက်ပြားစေတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ အစစ်ခံတဲ့ သက်သေ နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ယူကရိန်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ယာယီ အမေရိကန် သံအမတ် ဘီလ်တေလာကတော့ သူ့ရုံးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က သမ္မတထရမ့်ဟာ ယူကရိန်းထက်စာရင် ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ကို ပိုပြီး အလေးထားနေတယ်လို့ ပြောတာကြားဖူးကြောင်း သူ့ကို ပြောခဲ့တယ်လို့ ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အခု ကြားနာ စစ်ဆေးမှု အစမှာ ဒီစုံစမ်း စစ်ဆေးမှုဟာ သမ္မတ ထရမ့်က ယူကရိန်းကို ဖိအားပေးပြီး အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ယူကရိန်း ပါဝင်ပတ်သက်စေခဲ့မှု ရှိမရှိ စုံစမ်းမှာ ဖြစ်တယ်လို့ အောက်လွှတ်တော် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ အဒမ် ရှစ်ဖ်က ပြောပါတယ်။
သူက မစ္စတာ ထရမ့်ဟာ ဥပဒေ ချိုးဖောက်တယ်လို့လည်း စွပ်စွဲထားပါတယ်။
ဒီ အများပြည်သူကို ပြသတဲ့ ကြားနာမှု မစခင် ပြုလုပ်တဲ့ တံခါးပိတ် စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုမှာတော့ ထရမ့်ဟာ သူတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်း သူ့ရဲ့ ပြိုင်ဘက် အမေရိကန် သမ္မတလောင်း ဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ သူ့သားတို့ ငွေကြေးမသမာမှုတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု လုပ်မပေးမချင်း ယူကရိန်းကို ပေးမယ့် စစ်ရေးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ကြေး အကူအညီတွေကို ဆိုင်းငံ့ထားမယ်လို့ ပြောတဲ့အကြောင်း သံတမန်တွေက ထွက်ဆိုထားကြပါတယ်။
ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မှာ ပြုလုပ်နေတဲ့ ကြားနာပွဲကို ရုပ်မြင်သံကြားက တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပေမယ့် သမ္မတထရမ့်ကတော့ သူ့ရုံးခန်းမှာပဲ အလုပ်လုပ်နေတယ်၊ ဒီကြားနာပွဲကို ကြည့်မနေဘူးလို့ အိမ်ဖြူတော်ပြောခွင့်ရ စတက်ဖနီဂရစ်ရှမ်က သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
မစ္စတာထရမ့်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အခုကြားနာပွဲဟာ အတုအယောင် ဖြစ်တယ်။ သူ့ကို တရားခံရှာဖို့ လုပ်တာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကို ကြည့်ဖို့ သူ မအားပါဘူးလို့ သတင်းထောက်တွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ထရမ့်ကို အရေးယူဖို့ လွှတ်တော်ရဲ့ ကြားနာမှုကို လူအများတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်